Tôya Satô – Directors – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Kaiji 2: The Ultimate Gambler (2011) Unicode 2011 တုန်းကထွက်ခဲ့ပီး လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Japan လောင်းကစားဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ် ပထမကားမှာ Kaiji2တစ်ယောက် အလုပ်ကြမ်းဘ၀ကနေ လွတ်မြောက်သွားပေမဲ့ ပိုက်ဆံတော့ မချမ်းသာသွားခဲ့ပါဘူး အခု ဒုတိယကားမှာ အကြွေးတွေပြန်တင်ပီး အရင်လို အလုပ်ကြမ်းသမားပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ အသက်နဲ့လောင်းရတဲ့ လောင်းကစားပွဲတွေမှာပြန်လည်အနိုင်ရပီး အရင်လိုလွတ်မြောက်နိုင်မလား ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရမဲ့ imdb 6.5 ရထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်. Blu-ray 1080p DTS Quality နဲ့မရရအောင် Channel M-Sub ကနေ ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Van ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi 2011 တုန္းကထြက္ခဲ့ပီး လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့တဲ့ Japan ေလာင္းကစားဇာတ္ကားျဖစ္ပါတယ္ ပထမကားမွာ Kaiji2တစ္ေယာက္ အလုပ္ၾကမ္းဘ၀ကေန လြတ္ေျမာက္သြားေပမဲ့ ပိုက္ဆံေတာ့ မခ်မ္းသာသြားခဲ့ပါဘူး အခု ဒုတိယကားမွာ အေႂကြးေတြျပန္တင္ပီး အရင္လို အလုပ္ၾကမ္းသမားျပန္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔ အသက္နဲ႔ေလာင္းရတဲ့ ေလာင္းကစားပြဲေတြမွာျပန္လည္အႏိုင္ရပီး ...
IMDB: 6.5/10 645 votes
Kaiji: The Ultimate Gambler (2009) Unicode ဒီဇာတ်ကားကို ငယ်တုန်းက မကြည့်ဖူးတဲ့ရှားမယ်ထင်ပါတယ် ဂျပန်ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် Death Note ထဲက မင်းသားနှစ်လက် ပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းပါ. imdb 6.5 အထိရထားတဲ့ ဒီကားလေးရဲ့ အညွန်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Kaiji ဆိုတဲ့ ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပိုက်ဆံချေးတာကို အာမခံပေးလိုက်မိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းက အကြွေးမပေးပဲ ရှောင်သွားတဲ့ Kaiji တစ်ယောက်ဆီပြသာနာကရောက်လို့လာပါတော့တယ်. ချေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံအပြင် အတိုးတွေက များပြားလို့ ပြန်ဆပ်ဖို့ ခက်ခဲလာတဲ့ အခါ လောင်းကစား သင်္ဘောပေါ်ကနေ အလောင်းအစားတွေပြုလုပ်ပီးလွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားရက. ပိုမိုခက်ခဲလာခဲ့ပီးနောက်ဆုံး အသက်နဲ့လောင်းကစားပြုရတဲ့ အထိဖြစ်လာခဲ့တယ်. ဒီလိုဇာတ်လမ်းကောင်းကို မကြည့်ရသေးသူများအတွက် ကြည့်ပီးသား ပြန်ကြည့်ချင်သူတွေအတွက် Blu-ray 1080p Quality နဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်. ဒီဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Van ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ဒီဇာတ္ကားကို ငယ္တုန္းက မၾကည့္ဖူးတဲ့ရွားမယ္ထင္ပါတယ္ ဂ်ပန္ဇာတ္ကားေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ Death Note ထဲက မင္းသားႏွစ္လက္ ပါဝင္ထားတဲ့ ...
IMDB: 6.5/10 1337 votes